समाजवादी पार्टीमा भट्टराई पक्षको बिजोग - Sidha News
समाजवादी पार्टीमा भट्टराई पक्षको बिजोग
काठमाडौ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपासँग सत्तासझेदार समाजवादी पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीच टकराव देखिएको छ । सत्ताका विषयलाई लिएर केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद डा. बाबुराम भट्टराईबीच मनमुटाव शुरु भएको हो । यसअघि उपेन्द्र यादव सरकारमा बस्ने र डा. भट्टराईले सरकारबाट बाहिरने कुरा गरेका थिए । यसरी सरकारमा बस्ने र नबस्ने कुराबाट मनमुटाव शुरु भएको विवादकै कारण राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालसँगको एकीकरण अलपत्र परेको छ।
समाजवादी पार्टीले सरकारमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयको लागि छलफल गर्न संघीय परिषद र केन्द्रीय समितिको बैठक नै बोलाएको थियो । तर समितिमा यादव पक्षको बाहुल्यता भएको हुनाले यादवको चाहना बमोजिम बैठकले न त सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो न त राजपासँग एकीकरण गर्ने नै ठोस निर्णय गर्यो । यादव पक्ष सरकारबा बाहिरने पक्षमा पनि छैन भने राजपासँग एकीकरण गर्न पनि ईच्छुक देखिदैन ।
उता बाबुराम भट्टराईले समेत सरकारमा बसेर केही काम नहुने भन्दै सरकारबाट बाहिरिनको लागि दबाब दिईरहेका छन् । तर यदवले सरकारमै रहने जबाफ दिएपछि भट्टराई असन्तुष्ट भएको बताईन्छ । भट्टराईको असन्तुष्टिलाई साम्य पार्न यादवले राष्ट्रिय सभामा आफ्ना पार्टीका तर्फबाट सांसद भएका रामप्रित पासवानको अवधी सकिएसँगै उक्त स्थानमा भट्टराई पत्नी हिसिला यमीलाई लैजाने ललीपप देखाएका छन् ।
उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र डा. भट्टराईबीच बढेको दूरीका कारण आफूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले माईनस गरेको महसुस पनि यादवले गरेका छन् । मन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा आफू अपमानित हुनुपरेको, गौर घटनाको धम्कीले दिनरात सताउन थालेको पनि महसूस गरेका छन् । उपेन्द्रको बुझाई छ– बाबुरामले अति आलोचना गर्दा नै हो, अपमानको घुड्को पिएर भए पनि कानुन मन्त्रालयमा जानु परेको । भित्रभित्रै आफै जल्दै गरेका मन्त्री यादवले यस विषयमा बाहिर मुख चाही खोलेका छैनन् । तर यादवले सरकाबाट बाहिरिदा झन कमजोर भईने र राजपा सरकारमा सामेल हुन सक्ने विश्लेषण गर्दै सरकार नछाड्ने मनस्थितिमा पुगेको बताईन्छ ।
त्यसो त समाजवादी पार्टीभित्र पार्टी एकीकरण हुनु अगाडी तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र नयाँ शक्तिबीच एकता भएपनि नेताहरुको मन भने मिलेको छैन । पछिल्ला दिनहरुमा मन्त्री यादवले भट्टराईकै कारण पार्टीमा क्षयीकरण भएको महसुस गरेका छन् । हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा समाजवादी पार्टीले भट्टराईको प्रभाव कुनै पनि क्षेत्रमा नहुदा राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेको यादव पक्षको ठम्याई छ ।
पछिल्लो पटक समाजवादी भित्रको विवाद दुई नम्बर प्रदेश कमिटी गठनमा सतहमा आएको छ । २ नम्बर प्रदेश कमिटी गठन हुँदा आफूहरुलाई किनारा लगाएको भट्टराई पक्षको आरोप छ । हालै २ नं. प्रदेश कमिटी गठन गर्ने क्रममा भट्टराई पक्षधर पूरै माइनस भएका छन् ।